पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी ‘सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउने, धम्क्याउने काम नगर्नुस्’ – Democracy Nepal
39 seconds ago Hom Prasad Acharya
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई अलमल्याउने र धम्क्याउने काम बन्द गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संसद् विघटन गर्ने कदममा संविधानको कुनै धारणा आकर्षित नहुने संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको अर्को दिन प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफी धम्की आएको हो ।
‘अहिले केही अजासु (अति जान्ने–सुन्ने) निस्किएर संवैधानिक इजलासबाट हुँदैन भनेर सडकबाटै फैसला दिन खोजिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासबाट हुँदैन भनेर कुन संविधानमा छ ? संविधानमा त संवैधानिक इजलास छ । उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जुन इजलास भन्यो त्यही हुनुपर्ने, जे फैसला माग्यो त्यही फैसला गर्ने हो भने अदालत किन चाहियो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो, ‘एउटा वकिल अदालतविरुद्ध सिंहजस्तै गर्जिएर वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नु भनेर न्यायाधीशलाई अर्ती–उपदेश दिन्छ । के भन्न खोजेको ? किन धम्क्याउन खोजेको ? म भन्न चाहन्छु, सम्मानित स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कदर गर्न सिकौँ । कदर गरेर जाऊँ ।’
‘सुकेका रूखले फल दिन्छ भनेर हुन्छ ? पाइराखेको सुविधा अझै डेढ–दुई वर्ष खाऊँ भनेको हो कि, अब पनि कुहिएका फललाई रूखमै टाँस्न खोजेर हुन्छ ? त्यो भ्रम हो । चुनाव हुन्छ, त्यसैले चुनाव ०७८ सालको वैशाख १७ गते शुक्रबार र वैशाख २७ गते सोमबार, कोही पनि भ्रममा पर्न जरुरी छैन ।’ उनले चुनावी माहोल तयारी गर्ने गरी अघि बढ्न कार्यकर्तालाई निर्देशन पनि दिए ।
‘मैले अस्ति निदाउरो मुख लगाएर प्रचण्डले बोलेको सुने । वैशाखबाट केपी ओली राजनीतिबाटै सिध्दिन्छ । अलि समय काम गरेकाले माया पनि लाग्दोरहेछ । उहाँको साथमा अब हिजो जनयुद्ध लडेकाहरू को छ अब ? सबै सिध्यिए । नारायणकाजी कुनै जनयुद्ध लडेका मान्छे हुन् ? यताको गोटी उता सार्‍यो, उताको गोटी यता सार्‍यो अनि । आज को छ उहाँसँग ?’ जनयुद्धका आर्किटेक्ट रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझीसहितका प्रभावशाली नेता तथा जनयुद्धका थुप्रै कमान्डरहरूले नै आफूलाई साथ दिएको उनको संकेत थियो ।
त्यस्तै, उनले प्रचण्डको सबै प्रयास र भविष्यवाणी अहिलेसम्म आफूले असफल पार्दै आएकाले यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था आउने पनि ठोकुवा गरे । ‘तिनका भविष्य कति ठाउँ खेर गए ? महान् जनयुद्ध फर्सी कुहिएजस्तो कुहियो । नेपाली जनतालाई जातजाति, भूमि–भूमिमा फुटाउन खोजे, दिइएन । पहिचानको राजनीतिका नाममा देश टुक्र्याउने राजनीति असफल भयो । विखण्डनवाद वार्ता गरेर समाधान गर्‍यौँ, उनीहरू छाती पिटेर रोए । चीनतिर नाका खोलेर पारवहन सम्झौता गर्‍यौँ, आत्तिएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे, असफल बनाइयो,’ ओलीले भने ।
Previous गिजोलिदै नेकपा विवाद : आयोगले दुवै पक्षलाई भन्यो, ‘कागजात कानुनी प्रक्रियाबाट आएन’